Supergeo wuxuu gaashaanbuur la leeyahay GPS PL si loogu bixiyo xalalka ugu dambeeya ee macruufka - Geofumadas
Abriil, 2014 GPS / Qalabka, SuperGIS
SuperGeo Technologies ku dhawaaqday iskaashi xiiso leh GPS PL, model ka shaqeeya in barbaro dareenka iyo maalin walba la dallacsiiyey by shirkadaha halkii ay u tartamaan suuqyada, awood u samaysaa aragnimo user wanaagsan.
Labada shirkadood waxay bixiyaan xalalka GIS ee aaladaha mobilada, halka GPS.L ee suuqa Polish ay ku horumartay bixinta adeegyada la-talinta, tababarka, taageerada farsamada iyo liiska alaabta qalabka. In kasta oo baaxaddiisu ay ka baxsan tahay soohdinta, waddamada deriska la ah waqooyiga Yurub.
Dhanka kale, SuperGeo waxay horumarinaysay barnaamijyada GIS ee heer software ah. Kiiska SuperSurv kuma jiro kaliya qalabka Android laakiin sidoo kale hadda waxaa loogu talagalay macruufka. Iyagu ma ahan kuwii ugu horreeyay, tartanku waa adag yahay hadda in aaladaha moobiilku aad ugu badan yihiin moodada, isku xirnaanta ayaa ka waxtar badan iyo adeegyada juqraafiyeed ee internetka waxay leeyihiin heerar aad u deggan. Tani waxay ka dhigan tahay in kiniiniyada loo tixgeliyo inay yihiin aalado shaqeynaya oo keliya helitaanka xogta, laakiin sidoo kale inay soo qabtaan macluumaadka miisaanka ku jira berrinka, si sax ah ugu sawiraan shaashadda taabashada, ku sameeyaan dayactirka qashinka ee macluumaadka ku dhex jira server dhexe, iyo waxyaabo kale.
Xaqiiqdu waxay tahay in dadka isticmaala ay isku mid yihiin, labadaba software ee loogu talagalay geolocation iyo qalabka loo yaqaan 'action'.
Isku xirnaanta labada shirkadood waxay raadinayaan xalka "turnkey" ee loo yaqaan 3R SuperSurv, kaas oo markii hore diirada lagu saaray dadka isticmaala Booland iyo Yurub. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko saameynta ay ku yeelan karto isticmaaleyaasha, iyadoo la ogyahay in GPS.PL ay ku jirtay aagga qalabka dhul-bixinta muddo ku dhow labaatan sano iyada oo la adeegsanayo dalabyada badda, duulista, beeraha, dhirta, deegaanka, difaaca iyo guud ahaan qabashada xogta. berrinka
Inkasta oo ay tahay nooc ka mid ah SuperSurv oo loogu talagalay macnaha guud, waxaa jira qiimo dheeraad ah oo khibrad this, tan ka sii iibinta kiniin leh software loo rakibay, qalabyada GPS.PL waxaa lagu qiimeeyaa macaamiishooda si ay u noqdaan kooxo shaqo xaalado xun.
Ma ahan inay la mid noqoto tagista dukaanka Apple si aad u iibsato kiniin, ku iibsato SuperSurv ZatocaConnect, rakib oo ku shaqee. Halkan waxaan ka hadlaynaa wax kale ... asxaabteena reer Poland waxay awoodi doonaan inay dhahaan dhowr bilood gudahood.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan SuperSurv: http://www.supergeotek.com/ProductPage_SuperSurv.aspx
Arag in badan oo ku saabsan 3R-SuperSurv gudaha GPS.PL: http://www.gps.pl/3r
Post Previous" Hore MDT, Qalab dhammaystiran oo loogu talagalay Mashaariicda Sahanka iyo injineernimada
Post Next Tiknoolajiyada tiknoolajiyada ee kaabayaasha xogta ee ka jira Latin AmericaNext »